Amadoda, anentshebe noma angenayo intshebe? - Iseluleko Samadoda AseSitayeleni | Amadoda aSitayela
Amadoda, anentshebe noma angenayo intshebe?
U-Alicia tomero | | Ukunakekelwa komuntu siqu, imfashini, Izitayela zezinwele, Amathrendi
Ngentshebe noma ngaphandle kwentshebe? Kakade imibuzo eminingi ngokungangabazeki iphakanyisiwe mayelana nokubukeka komuntu. Njengamanje intshebe yingxenye ekhangayo yabesilisa abaningi kanye neminyaka ehlukene. Kodwa abesifazane bacabangani? Ngabe intshebe izwa kahle kangangoba kufanele ukuthi ushintshe ukubukeka kwakho?
Indlela ayihambelani kakhulu, kufanele ukhulise intshebe yakho futhi ngithemba ukuthi yonke into iyawenza umlingo wayo. Uma uthola ukuthi unentshebe egcwele, kuzokujabulisa ukuveza ukuthi ungawasebenzisa kanjani amaqhinga esingakunika wona lesi sixhumanisi. Uma kumayelana nokunikeza ivolumu nokunikeza ukunakekelwa okuhle kakhulu, nathi sinakho konke amakhambi amahle kakhulu wokuthuthukisa leyo ngxenye yesilisa.
1 Abesilisa abangcono ngezintshebe noma ngaphandle kwezintshebe?
2 Yini ekhethwa amadoda?
3 Yiziphi izizathu ezikwenza ukholelwe ukuthi udinga ukuba nentshebe?
4 Ukubukeka okuthopha kunazo zonke kulo nyaka
Abesilisa abangcono ngezintshebe noma ngaphandle kwezintshebe?
Ngokocwaningo, abesifazane bathanda amadoda anentshebe. Futhi ngaphandle kokungabaza, umphumela muhle kakhulu, ukuthi kungabonakala ukuthi kukhona igagasi elikhulu lemfashini ebusweni babaningi bethu. Akusamele kuphela okuthile ngokomzimba, kepha kungenziwa kukholwe ukuthi indoda ikhombisa amakhono amakhulu okuzala nokuthi ube nempilo engcono. Kepha qaphela ngaleli qiniso, intshebe edidekile, eyingcosana, ende noma engenathemba inganikeza umphumela ohlukile.
Ngokuvamile, abesifazane abangashadile nabashadile abanamathuba okuzala ngokungangabazeki bakhetha amadoda anezinwelemhlawumbe ebusweni. Limele umlingiswa ovelele, onolaka onezimpande ezijulile ukuba nesibindi. Ngokuphambene nalokho, amadoda agundiwe awazange anikeze lowo mbono nokubona.
Kwabesifazane indoda enentshebe njalo uthandeka ngokwengeziwe futhi uyindoda, Kubonakala sengathi ubulili obubusayo futhi kude kakhulu. Intshebe ithuthukisa kangcono isimo sobuso, ngaphezu kwalokho indoda ingakwazi fihla isimo esithile noma ukungapheleli yobuso evumela intshebe yakhe ukuba ikhule. Kubonakala kwabesifazane ukuthi bangamadoda angamaqhawe angamaqhawe kakhulu futhi ahlonishwayo.
Kodwa-ke akuwona umbono ofanayo ku- izintshebe ezinkulu, ezinde nezinganakekile. Abesifazane bangase babe novalo ngokubona nje lolu hlobo lwentshebe, ngoba bangaluhlanganisa nokuntuleka kwenhlanzeko.
Yini ekhethwa amadoda?
Amadoda ancamela ukuzama khulisa intshebe cishe izinsuku ezingama-5-10. Ngakho-ke bathola ukuthi lokho kubukeka kobudoda kunjani. Konke kuzoya ngenani lobuso bezinwele, kepha uma bengabukeki kahle ngokuya ngokuthanda kwabo, kuzodingeka ukuthi baphuce ubuso babo kuze kufike ezingeni lokuqothulwa.
Lapho intshebe ayikhuli emadodeni
Uma abesilisa abanezintshebe beqashelwa ekhangayo nabanobuciko obuningi bakhe, bazoyivumela ibukeke ngabo bonke ubukhazikhazi bayo. Ngalokhu singakunika izeluleko ezinhle kakhulu ku- "ungayithola kanjani intshebe egcwele"Noma"amathiphu amahle kakhulu okunakekela intshebe ". Uma into yakho ukunakekela intshebe yakho nokuyilolonga, nawe unayo lapha wonke amathiphu.
Yiziphi izizathu ezikwenza ukholelwe ukuthi udinga ukuba nentshebe?
Ukugqoka intshebe sekuvele kuyinkomba yokuthie ugcine ukubukeka kwendoda kakhulu. Abesilisa bayayithanda ngoba idala amandla amakhulu, ukubukeka kukhulu kakhulu futhi kunesimilo, yingakho bebukeka bekhanga ngokwengeziwe. Uma uyiqhathanisa nabesilisa abashefiwe, uzobona ukuthi ayikugqoki kubenza bube mnandi ubuso babo futhi babonakala bethobekile ngokwengeziwe.
Indoda enentshebe idala isimo esimakwe kakhulu, kunika ukubonakala kokuba sezingeni eliphakeme futhi ikakhulukazi uma igcinwa iminyene, inabantu abaningi futhi inakekelwa kahle. Ngokunikwa amandla abo, lokhu kuyisibonakaliso sokuvuthwa, ngoba izinsizwa zinobuchule bokungabi nentshebe eqinile.
Ngakolunye uhlangothi, abesilisa abangenazo izintshebe noma labo abanamadevu bathola amaqanda amancane kakhulu, akusho ukuthi abakhethiwe, kepha ukuthi abesifazane ezindaweni eziningi zokuvota bathanda amadoda anentshebe.
Ukubukeka okuthopha kunazo zonke kulo nyaka
Ama-stylist kulokhu kubukeka abheja ukubonwa kwemvelo okuphawula ubuntu. Akuwona umbuzo wokuba nentshebe ephelele, kepha ukuba lula kwayo kuyabonakala. Izinwele zingatshalwa izinsuku ezimbalwa nje bese hlwaya bese umaka, makubhekwe ukuthi kulungisiwe.
Esinye isitayela ongasigqoka sithi intshebe engenawo amanxeba asemaceleni, Kuyisitayela esingashiywa sikhulile futhi sibukeka singokwemvelo. Kufanele uthole ukubukeka okulula, ngaphandle kwentamo egundiwe, kepha lokho kukhombisa ukuthi uthathe ukunakekelwa kwakho okuncane kwansuku zonke. Le ntshebe ekhule kakhulu ithopha ebusweni enezici eziyisikwele nezimakwe kakhulu.
Ungakhohlwa ukuthi sinobuso obungenakubalwa bosaziwayo abakhethe ukugqoka ubuso babo 'ngentshebe noma ngaphandle kwentshebe'. Sinabalingisi abanjengoLeonardo Di Caprio, Ashton Kutcher, Mario Casas noMiguel Ángel Silvestre. Noma abadlali bebhola abafana noDavid Beckham, uLeo Messi noma unozinti u-Iker Casillas. Uma ufuna ukufunda okuningi ngalesi sihloko, ungafunda "izinhlobo ezahlukahlukene zentshebe".
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Amadoda, anentshebe noma angenayo intshebe?
Ungawanciphisa kanjani ama-hemorrhoids